Semalt गुगल एनालिटिक्स स्पाम कसरी हटाउने भन्ने बारे चरण-चरण-चरण निर्देशन प्रदान गर्दछ
गुगल एनालिटिक्समा ट्राफिक स्प्याम देखा पर्ने बारेमा सामान्य चिन्ता छ। अर्को लेखमा, म्याक्स बेल, Semalt ग्राहक सफलता को प्रबन्धक, यातायात स्प्याम के संदर्भित गर्दछ, यो तपाईंको साइट को अर्थ के हो, र समस्या समाधान गर्न को लागी कार्य गर्न को लागी कदम चाल्छ।
गुगल एनालिटिक्स स्प्याम
रेफरर स्पाम "विश्लेषक" र Google विश्लेषकको "पृष्ठदृश्य" सेक्सनमा देखा पर्दछ। यो तपाइँको साइट मा निर्देशित स्पाम को प्रकार मा निर्भर गर्दछ। तिनीहरू व्यक्ति द्वारा वास्तविक भ्रमणको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, र उनीहरूलाइ केहि भेट्टाउन सजिलो छ किनकि उनीहरू शंकास्पद यूआरएलहरू प्रयोग गर्छन्। तपाईको एनालिटिक्समा देखा पर्ने स्पामले दुई मध्ये कुनै पनि रूप लिन्छ:
भूत रेफरर स्पाम। मापन प्रोटोकल गुगल एनालिटिक्स प्रकार्यहरूमा एक लुफोल हो, जसले यसको विकासकर्ताहरूलाई अफलाईन हुँदा वा नयाँ साइट वातावरणमा प्रयोगकर्ता गतिविधि क्याप्चर गर्न अनुमति दिन्छ। विकासकर्ताहरूले यसैले साइटको भ्रमण नगरी GA लाई सिधा जानकारी पठाउन सक्छन्। भूत रेफर गर्नेहरूलाई .htaccess फाईल प्रयोग गरेर ब्लक गर्न असम्भव भयो किनकि तिनीहरूले शारीरिक रूपमा साइट पहुँच गर्दैनन्। .Htaccess फाईल एक विधि हो जुन साइटको भ्रमण गर्न प्रयोग हुने विशिष्ट डोमेनहरू हटाउन प्रयोग गरिन्छ। भूत रेफरकर्ताहरूलाई हटाउने उत्तम तरिका तिनीहरूलाई गुगल एनालिटिक्समा फिल्टर गर्नु हो ताकि यसले मान्य होस्टनामहरूबाट डाटा प्रतिबिम्बित गर्दछ।
क्रॉलर रेफरल स्पाम। यो ज्यादातर बट्सको काम हो जुन साइट भ्रमण गर्दछ, robots.txt फाईलमा सेट गरिएका नियमहरूको अवज्ञा गर्दछ, र ट्राफिकको अंशको रूपमा गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टमा समाप्त हुन्छ। यी बोटहरूले छोटो अवधिमा दोहोर्याएर साइटको भ्रमण गर्दछन्, जसले परिणाम स्वरूप अवास्तविक चुचुरो र ट्राफिकमा उपत्यका गर्दछ। यस प्रकारको स्पामका लागि तपाईले .htaccess फाईल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ बट्सको विशिष्ट डोमेनहरू रोक्न। वैकल्पिक रूपमा, GA रिपोर्टहरूमा देखा पर्नेबाट निर्दिष्ट रेफरल स्रोतहरू समावेश नगर्न फिल्टर विधि प्रयोग गर्नुहोस्।
यो गर्नुको मतलब के हो?
साइटमा बारम्बार भ्रमण गर्ने बोटहरू राख्ने विन्दु जीए रिपोर्टहरूमा देखा पर्नु हो। तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य उनीहरूको डोमेनहरू सन्दर्भकर्ताहरूको सूचीमा देखा पर्नु हो। जब यी लिंकहरू रिपोर्टमा देखा पर्दछन्, मालिकको कौतूहल पैदा गर्दछन् किन तिनीहरू यती धेरै ट्राफिक ल्याए भनेर हेर्नको लागि। तुरून्त तपाईं लिंकमा क्लिक गर्नुभयो, तपाईं तिनीहरूको साइट मा एक आगन्तुक को रूप मा रेकर्ड। विज्ञहरूले वेबसाइट मालिकहरूलाई अपरिचित लिंकहरूमा क्लिक नगर्न सल्लाह दिन्छन् किनकि उनीहरूले कम्प्युटर भाइरसहरूको लागि मध्यस्थको रूपमा पनि काम गर्न सक्दछन्।
साइटमा स्प्याम ट्राफिकको प्रतिकूल प्रभावहरू
स्पाम ट्राफिकमा साइटमा यति धेरै नकरात्मक प्रभाव हुँदैन। भूत रेफरलहरूको लागि, तिनीहरू वेबसाइटमा कहिले पनि पुग्न सक्दैनन् ताकि बट्स एकैछिनमा आउँनेछन्। यद्यपि गहन प्रभावहरू रिपोर्ट तथ्या .्कहरूमा छन्। स्प्याम ट्राफिकले बजारको दृश्यलाई क्लाउड गर्दछ साइटको विशिष्टताहरू जस्तै सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धी आगन्तुक प्रवृत्ति, कसरी तिनीहरू यससँग कुराकानी गर्छन्, राम्रो तरीकाले तिनीहरूलाई संलग्न गराउने।
स्प्याम ट्राफिकले बाउन्स रेटलाई पनि असर पार्नेछ किनभने उनीहरूले १००% बाउन्स रेट फिर्ता गर्दछ, यसले वास्तविकतामा देखिने भन्दा उच्च देखिने बनाउँछ। जे होस्, यसले खोज परिणाम पृष्ठमा तपाइँको समग्र रँकिंगलाई असर पार्दैन किनकि Google ले कुनै पनि Google एनालिटिक्स विवरणलाई ध्यानमा राख्दैन किनकि उनीहरूले स्तर निर्धारण गर्दछ।
के त्यहाँ स्प्याम ट्राफिकबाट कुनै फाइदाहरू आर्जित छन्?
कुनै लाभ छैन जुन स्प्याम ट्राफिकले सामान्यतया वेबसाइट वा एनालिटिक्समा ल्याउँदछ जबसम्म तपाईं पृष्ठ दृश्यहरूमा बढाइबढिएको देख्न चाहानुहुन्न।
स्प्याम ट्राफिकबाट छुटकारा पाउँदै
गुगल एनालिटिक्समा नयाँ "दृश्य" सिर्जना गरेर सुरू गर्नुहोस् सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाइँ केही वास्तविक ट्राफिक फिल्टर गर्नुहुन्न। कच्चा डाटाको स्रोतको रूपमा कार्य गर्नको लागि सँधै मौलिक दृश्य हुन्छ, साथै केही गलत भएमा ब्याकअप पनि हुन्छ। तपाईंको प्रोफाइलको व्यवस्थापक सेक्सनबाट "दृश्य" ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। एक ड्रप-डाउन मेनू देखा पर्दछ र "दृश्य सिर्जना गर्नुहोस्"। वेबसाइट थप्नुहोस्, एक उपयुक्त समय क्षेत्र, र नयाँ दृश्य को पूर्ण निर्माण। तपाई फिल्टर लागू गर्न चाहानु भएको दृश्य छान्न "होम" मा क्लिक गर्नुहोस्।
अर्को चरण भनेको कुन होस्टनामहरू मान्य छन् र ती होइनन् भनेर पहिचान गर्नु हो। तपाईं सक्कली दृश्यबाट पहुँच गर्न सक्नुहुने सूचीबाट छनौट गरेर यो गर्न सक्नुहुनेछ। अनुक्रम (दर्शक> टेक्नोलोजी> नेटवर्क> होस्टनाम) अनुसरण गर्नुहोस्।
भूत रेफरलहरूको लागि अब नयाँ फिल्टर सिर्जना गर्ने समय आएको छ। भर्खरै सिर्जना गरिएको दृश्य छनौट गर्नुहोस् र "फिल्टरहरू" चयन गर्नुहोस्, जहाँ नयाँ जोड्नको लागि प्रोम्ट देखा पर्नेछ। नयाँ फिल्टरलाई एउटा नाम दिनुहोस्, र निश्चित गर्नुहोस् कि यो "कस्टम" हो। "समावेश" गर्न बक्स जाँच गर्नुहोस् र "फिल्टर फाँट" मा ड्रप-डाउन मेनूबाट "होस्टनाम" चयन गर्नुहोस्। | द्वारा छुट्याईएको फिल्टर ढाँचामा तपाइँको सबै मान्य होस्टनाम घुसाउनुहोस् कुनै ठाउँ बिना। * कुनै डोमेन पहिले यस भित्र कुनै पनि सबडोमेन क्याप्चर मद्दत गर्नुपर्दछ। बचत गर्नुहोस् र बाहिर निस्कनुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्।
क्रोलर रेफरलहरूको लागि, अनुकूल फिल्टर बनाउनुहोस् र "बहिष्कार गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्। "फिल्टर क्षेत्र" बाट "अभियान स्रोत" चयन गर्नुहोस्। "फिल्टर पैटर्न" मा पहिचान गरिएको स्पामी डोमेनहरूको सूची समावेश गर्नुपर्दछ।
अन्तमा, त्यहाँ राम्रो बट्सबाट ट्राफिक हटाउन आवश्यक छ जस्तै गुगल बोटबाट किनकि साइटमा यसका गतिविधिहरू विश्लेषक ट्राफिकमा पनि देखा पर्न सक्छ। सिर्जना गरिएको नयाँ दृश्य अन्तर्गत, सेटि knownहरू चयन गर्नुहोस् जहाँ सबै विकल्पहरू र स्पाइडर फिल्टर गर्न तल एक विकल्प हुन्छ। बक्स जाँच गर्नुहोस्, र तपाइँ जानुहुन्छ।